आफ्नै कुरा: 01/01/2012 - 02/01/2012
हामी, नारी र फेसबूक
पहिले पहिले (भर्खर भर्खर ईन्टरनेट चलाऊन सिक्दा) याहू च्याट रूममा मान्छे खोजी खोजी च्याट गरिन्थ्यो । चिनेको कोही अनलाइनमा भेट्टाइयो भने त देउतै भेटेझैं हुन्थ्यो र झन् लामै गफ हनिन्थ्यो । कतिपल्ट त नजिकैको कम्प्युटरमा बसेको साथी सँग पनि च्याट मै कुरा गरिन्थ्यो । "ओेइ! मेरो मेसेज आयो ? हेर त !" " खै मुला आएन यार, फेरी पठा त । " यस्तो थियो हाम्रो फकेबूक पूर्वार्धताकाको जालसंचार ।
फेसबूक आएपछीको समयमा त हामी यति ब्यस्त भयौं कि हाम्रो जीवनशैलीमै बदलाव आयो । 'हाम्रा दाई, अंकलहरु बिहान उठ्ने बित्तिकै मुख धुन्थे रे ! हाउ फन्नी, इज नट इट ? ' आज भोलीका युवायुवतीले भन्न चै भनीनसकेका तर ब्यवहारबाट त्यसै साबित गर्दै आएको कुरा हो यो ।
अब हामी खुलेर साथी बनाउन थाल्यौं - याहू, हटमेल, जिमेलमा हैन नि फेरी । फेसबूकमा । एउटा अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चल्यो फेसबूकमा कस्को साथी धेरै भनेर । हामीले कक्ष।का साथी बटुल्यौँ, कलेजमा चिनेजानेका लाई बटुल्यौँ, गाउँघरका लाई पनि बटुल्यौँ, साथीका गर्लफ्रेण्डहरु बटुल्यौँ, आफ्नै गर्ल्फ्रेण्डहरु चै बटुल्न हल्का गाह्रो भयो । तर पनि जे होस् ,धेरै साथीहरु र उल्लेख्य रुपमा तरुनीहरु बटुल्यौँ ।
साथी भाई थप्दै जाने क्रम बढ्दै जाँदा हाम्रो एकअर्काबिच कुराकानी कम र चियोचर्चो गर्ने क्रमले तिब्रता लियो । अझ हाँसउठ्दो कुरो त के भने हामी तिनै साथीको बारेमा खोजतलास गर्छौ जो अनलाइन मै हुन्छ तर हामी कुरा गर्दैनौ । यसमा हामीलाई 'अफलाइन' भन्ने कुरोले दरो साथ दे'को पनि छ । हामी घण्टौं फेसबूक चलाउछौं तर 'अफलाइन' बसेर । हामी टुलुटुलु अनलाइन देखाइयका साथीहरु लाई हेर्छौ र बेवस्ता गर्छौ - बाटोमा हिँड्दा सामुन्ने परेका अपरिचित मान्छे झैं ।
तर पख्नुस् ! कुरो यत्तिकैमा सकिन्न नि फेरी । जब त्यो 'अनलाइन' देखाइएका मान्छेहरु ( अब आएर म यहाँ 'साथी'लाई मान्छे भन्न रुचाउछु )को सुचीमा 'केटी' देखा पर्छिन नि , तब उसको साथीत्व हरियो भएर आउछ । आईमाईजातीको फेसबूक प्रयोगमा म अनविग्य भएकोले लिङगत बिभेदमा माफि चाहन्छु । अब तपाईं भन्नुहोला -" साले! आँफै त्यस्तो गर्दो होला अनी जे पायो तेही लेख्छ" भनेर । मेरो प्रस्टीकरण : म पहिले आफुलाई हेर्छु अनी समाजलाई हेर्छु ।
"मान्छेहरुको 'प्राइभेसी' भन्ने कुरा पनि त हुन्छ नि । " भन्नु होला । म स्विकार्छु । तर नयाँ लुगा लगायो फोटो खिचेर हालेकै छ, आधा लुगा लगायो त्यो पनि फोटो खिचेर हालेकै छ । अनी अब 'प्राइभेसी' भनेको के हो आँफै भन्नु होला । के मान्छेहरु आईमाईजाती झै गोप्य रुपमा नग्नता नै चाहन्छन् त ? 'प्राइभेट्ली' 'पब्लिक' हुन चाहेका हुन् त ? उनी फेसबूकमा खासै केही लेख्दीनन् तर कमेन्ट भने धेरै चाहन्छिन ।
आजभोली फेरी फकेबूकमा साथीहरुसँग भेटघाट कम हुन थालेको छ । त्यसैले होला आजभोली फेरी साथीभाइ अनलाइनमा भेट्दा देउतै भेटे झैं हुन्छ ।